Chọpụta ihe ị ga-ahụ n'àgwàetiti Korcula | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Korcula
Korcula bụ agwaetiti dị n’Oké Osimiri Adriatic, nke dị na Croatia. Ọ dị na ógbè Dubrovnik-Neretva. O nwere ogologo kilomita 46 na obosara nke ihe dị ka kilomita asaa na ọ bụ agwaetiti nke isii kachasị na Adriatic. Ebila agwaetiti a kemgbe oge Neolithic, na-agafere na ya ndị Finishia, ndị Gris na ndị Rom.
Taa agwaetiti a bụ ezi jụụ ebe nwere nnukwu ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ ịkụ azụ, mana karịa ihe niile, ọ na-aga njem. Centerlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme ya efunahụghị amara ya ma enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ịhụ na obodo Korcula.
1 Otu esi aga Korcula
2 Ellọ elu Veliki Revelin
3 Colọ Marco Polo
4 Katidral St. Mark
5 Palacelọ Gabrielis
6 Osimiri Lumbarda
7 Ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
Otu esi aga Korcula
Agwaetiti a enwere ike iru naanị oke osimiri, ebe o nweghi ugbo elu. Enwere ụgbọ mmiri na-ahapụ Split iji gaa agwaetiti ahụ. Nwere ike ịga ụkwụ ma ọ bụ jiri ụgbọ ala, ebe ụfọdụ ụgbọ mmiri na-ebu ụgbọala n'ime ka ị nwee ike iji mgbazinye ụgbọ ala agwaetiti ahụ. N'ime agwaetiti ahụ ọ bụ nnukwu echiche iji ụgbọ ala na-agagharị, n'ihi na n'ụzọ ahụ ị ga-ahụ akụkụ ya niile, ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ ụsọ mmiri na obere obodo na mpaghara dị iche iche, gafere isi obodo. A na-eleta ya ngwa ngwa, ịkwesighi ịga njem ogologo oge n'ụgbọala, yabụ na-atụ aro ka ị banye na ya were ụgbọ mmiri.
Ellọ elu Veliki Revelin
Nke a ochie E wuru ụlọ elu na narị afọ nke iri na anọ ma na-eje ozi dị ka nbata obodo na ka na-echekwa. Agwaetiti a dị n'okpuru iwu Venetian ruo ọtụtụ narị afọ, ya mere, a pụrụ ịhụ ọta metụtara iwu a na ụlọ elu oge ochie a. Towerlọ elu a bụ otu n’ime ihe osise kacha ese foto n’agwaetiti a, mana ọ ga-ekwe omume ịhụ otu obere ebe ngosi nka dị n’ime ụlọ elu ebe e nwere uwe ndị a na-ahụkarị nke egwu Moreska, ụdị egwu a na-agba na Middle Ages. Ihe ọzọ enwere ike ime n'ụlọ elu a bụ ịrịgo elu iji hụ echiche, ọ bụ ezie na ha abụghị ndị kachasị ama na obodo ahụ, ha na-abụkarị ahụmịhe ọzọ.
Colọ Marco Polo
Eburu na nke a obere obodo onye njem Marco Polo mụrụ, obu ezie na Venice na-agbarita aha a, ebe obu na o doro anya nke oma ebe amuru ya. Ma na obodo a ị nwere ike ịhụ Casa de Marco Polo, ụlọ ochie nke enwere ụfọdụ nkọwa nkọwa maka ndụ onye njem ahụ. Na mgbakwunye, n'ụlọ a ọ ga-ekwe omume ịrị ụlọ elu iji nwee ọmarịcha echiche ma were ụfọdụ foto mara mma. Thislọ a bụ ụlọ mara mma, ọ bụ ezie na aha ahụ bụ ebe amụrụ Marco Polo elekwasịghị anya nke ọma, ebe ọ bụ na imirikiti ndị njem nleta na-enwe mmechuihu site na obere ihe ọ ga-ahụ, ebe ọ bụ na ọ nweghị arịa onwe onye.
N’ihu ụlọ a, e nwere Ebe ngosi Marco Polo, nke ị nwere ike ịmụtakwu ntakịrị banyere onye njem a. Agbanyeghị, enweghị ezigbo nyocha banyere ụlọ ngosi ihe nka, ebe ọ dị ka ọ nwere naanị ozi ogwe na enweghị ihe mbụ gbasara Marco Polo.
Katidral St. Mark
Nke a e wuru katidral malite na narị afọ nke XNUMX ruo nke XNUMX site n'aka ndị na-ewu obodo. Nleta nke ụka ahụ gụnyere inwe ike ịrịgo ụlọ elu iji hụ echiche kacha mma nke obere obodo. Na mgbakwunye, n'ime obere katidral a anyị nwere ike ịhụ eserese nke Tintoretto a ma ama na ebe ịchụàjà. Ka ọ dị ugbu a, ejiri ọla kọpa chọọ ụlọ chọọchị mma.
Este Palacelọ nke XNUMX narị afọ Ọ bụ ebe ụlọ ihe ngosi nka obodo dị. N’ebe ngosi ihe mgbe ochie a enwere ike ịchọta ihe sitere na oge Greek na Rom nke agwaetiti ahụ, ebe ndị mmadụ bi na ya. Enwekwara obí eze ndị ọzọ, dịka nke Abbey Obí nke narị afọ nke XNUMX. Obodo a pere ezigbo mpe, enwere ike ịga elekere ole na ole wee hụ ihe niile masịrị ya.
Ozugbo anyị gara n’etiti Korcula, ọ bụ oge iji zuru ike ma nwee obi ụtọ ọdịdị ala nke obere agwaetiti ahụ. Have ga-aga njem kilomita ole na ole iji ruo ama Mpaghara Lumbarda, nke kacha mara amara maka ịsa ahụ, ebe ọ nwere ụsọ mmiri ụfọdụ. Obodo a pere mpe, obodo nwere ubi vaịn na oke obi iru ala, nke di nma iji zuru ubochi.
Ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
Na obere agwaetiti enwere ike ịhụ akụkụ ọ bụla, a na-eme ya na obere oge. Na ebe ndịda enwere ụfọdụ obodo ntanaka dị ka Putnatska Luka, ebe enwere ike ịme mmiri ka ọ bụrụ isi ọrụ. Na Brna na Prizba enwere obere coves na osimiri ebe ị nwere ike ịnọ ụbọchị obi ụtọ ma dịkwa jụụ. N'ime ime agwaetiti ahụ, enwekwara obere obodo ndị dị ka oge ha kwụsịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Korcula